Goobta & Saacadaha
Fadlan ogsoonow: Xafiisyadeena hadda waxay u xiran yihiin xubnaha dadweynaha sababo la xiriira Covid-19.
Isniinta - Jimco, 8-da subaxnimo-5 galabnimo
Waxaan si fudud u heli karnaa baaskiil iyo gaadiidka dadweynaha. A Riding Nice Saldhigga wuxuu ku yaal meel u dhow geeska Chicago Avenue iyo South Washington Avenue, ama qaado Grand Round Scenic Byway. Waxaa ku yaal baarkin kursi gudaha ah oo ku yaal aagga u dhow dabaqa afraad. Khadka buluuga ah ee 'METRO Blue Line iyo Green Line' waxay ku istaagaan Saldhigga US Bank Stadium.
Meelo badan oo baabuurta la dhigto iyo jidadka baabuurta la dhigto ayaa laga heli karaa xafiisyadeena.
Quarter Ramp, 711 South 2nd St.
Wareegtada xafiisyada McKnight. Khidmadaha ayaa kordha inta lagu jiro dhacdooyinka gaarka ah iyo qaababka Guthrie.
Halkaan ka socota Tiyaatarka Guthrie.
Mitiriga baarkinka, xadka 2-saacadood
Meelaha la dhigto 2-saac ee magaalada waxay ku yaalaan meel ka baxsan albaabka weyn ee dhismaha iyo meelaha ku wareegsan.
Waxaad ka heli kartaa xayiraadaha mitirka iyo macluumaadka khaaska ah ee baabuurta la dhigto iyadoo la adeegsanayo magaalada khariidadda mashiinka baabuurta la dhigo.
Waxaan joojiney isticmaalka gooboheena shirarka ee dhammaan martida banaanka iyadoo aan sii wadno kormeerka horumarka la xiriira coronavirus-ka cusub. Fadlan aragkeena jawaabta coronavirus faahfaahin dheeraad ah.
Isu-keenidda dadka si loo xoojiyo xiriirka iyo dhiirigelinta fikradaha cusub waa lagama maarmaan u ah sii wadida ujeedooyinka barnaamijka. Markay suurtagal tahay, waxaanu ka dhignaa meelayn kuleej ah oo loo heli karo dadka deeqda bixiya iyo ururada wadaaga ah
Cynthia Binger Boynton gallery ayaa ka shaqeeya waxyaallaha iftiiminaya qaybaha barnaamijyada kala duwan.